Qaab dhismeedka magaalooyinka yaryar - qaabkii ugu dambeeyay ee Magaalada ee naqshada naqshada iyo alaabada
Qaab dhismeedka yaryar waa koox ka kooban dhismooyin yaryar oo si weyn u saameeya aragtida ay adeegsadayaashu ka helaan booska.
Adeegsiga qodobbada si taxaddar leh loo xushay ee naqshadaha dhismeyaasha yar yar ayaa aagga horumarsan uu ku qaadanayo dabeecadda, muujinta iyo, waxkastaba, inuu noqdo mid shaqeynaya.
Qaab dhismeedka yaryar wuxuu saameeyaa meelaha ku wareegsan, oo ay weheliso doogga iyo dhismayaasha, taasoo gacan ka geysata abuuritaanka amar xalaal ah.
Dhismaha qaab dhismeedka yar ee magaalooyinka ayaa noqda waxa magaalooyinka kala sooca.
Waxa ku xiga shayga ugu caansan, taallada ama meesha, oo si taxaddar leh loogu talagalay dhisme yar waxay noqon kartaa waxa ay inta badan dalxiiseyaasha ku xasuusan doonaan.
Waxay la xiriiri doontaa magaalo la siiyay. Waxay ku kala saari doontaa iyaga heer qaran iyo mid caalami ah.
Horeba maanta, hogaaminta, magaalooyin waaweyn oo casri ah ayaa midba midka kale kula tartamaa waxaana loogu yeeraa midka ugu soo jiidashada badan maahan kaliya dalxiisayaasha, laakiin sidoo kale dadka deggan, kuwaas oo qaab dhismeedka dadweynaha shaki la'aan shaki weyn ku jiro.
Si fiican loo qaabeeyey kuraasta, xoolo, miisaska, dheriyo ubax iyo walxaha garoomada ciyaarta si guul leh u soo noolayn kara deriska, u neefsan kara niyad cusub dhexdeeda, kana dhigi kara mid gaar ah oo sharrax leh.
Sidaas darteed, dadka deggan iyo dalxiisayaashaba waxay u badan tahay inay soo booqdaan.
Eeg sidoo kale: Qorshaynta magaalada - waa maxay saxda?
Naqshadaynta magaalooyinka yaryar - shaqooyin
Waxyaabaha sida habboon loo xushay ee alaabta guriga, qaab aan muuqan, Waxay kaa caawinaysaa dayactirka iyo hagaajinta howlaha tamarta ee bannaan.
Tusaalooyinka waaweyni waxay noqon karaan sidan dhajintaxannibaadda taraafikada wareegsan ama cakiran geedo ubaxa ubax leh.
Isla mar ahaantaana, waxay abuuraan qurxinta waxayna ka hortagaan gawaarida dhigashada baabuurta magaalada mamnuuc ka ah ama waxay xaddidayaan marin u socodka.
Tusaalooyinka kale ee noocan ah waa daboolida geedka, oo isku mar ilaaliyaya jiliftooda, xaddidaya waxyeelada, oo sameeya qurxin gaar ah.
Si kastaba ha noqotee, qalabka guryaha ayaa ka sarreeya wax walba baarkinka iyo alaabta wadada.
Kuwaas waxaa ka mid ah noocyo kala duwan kuraasta.
Xallinta baaxadda ballaaran ayaa u oggolaaneysa adeegsiga walxaha sifiican loogu mideeyay muuqaalka ku xeeran.
Kuwa ugu caansan waa kuraasta alwaaxda, laakiin marar badan ayaa jira kuraas bir, oo midab iyo qaab ah, iyo sidoo kale kuraasta la taaban karo ee la taaban karo, oo u eg qaab farshaxanimo ah.
Marka lagu daro kuraasta, isticmaaleyaasha boosaska magaalada waxay runtii jeclaan doonaan inay adeegsadaan musqulo qorraxda, oo ku habboon dhammaadka ma aha oo keliya boulevard, xeebta agteeda biyaha, laakiin sidoo kale jardiinada, oo ku wajahan qorraxda.
Shirkadda ayaa ah hormuudka qaybinta alaabada alaabta guriga ee casriga ah Naqshadeynta Magaalada.
Waxay si toos ah ula shaqaysaa istuudiyaha dhismaha iyo naqshadeeyayaasha, si ay u doortaan qaabka ugu fiican iyo astaamaha shaqeynaya ee qaybaha dhismayaasha yaryar.
Waxaa intaa dheer, waxay taageertaa Ururka Dhismaha Muuqaalka Dhulka, iyada oo loo marayo iskaashi toos ah, iyo sidoo kale bixinta xalka ugu dambeeyay iyo alaabada.
Naqshadeynta Magaalada ayaa ah wakiilka gaarka ah ee shirkadaha Talyaani ee ugu fiican Poland - Birta, Bellitalia iyo Naqshadeynta Magaalada.
Birta - bir iyo alwaax
Qaab dhismeedka magaalooyinka yaryar waa mowduuc ay shirkadda Talyaani si fiican u taqaan Birta.
Waxay soo bandhigtaa badeecooyin aad u ballaaran, badiyaa qaybaha soo socda: naqshadaha yar ee beerta iyo yar qaab dhismeedka magaalada.
Bixinta Metalco waxaa ku jira kuwa aad u fiican xalalka loogu talagalay horumarinta hufnaanta iyo waxqabadka ee jardiinooyinka, jidadka, jardiinooyinka iyo saldhigyada.
Metalco waxay soo saartaa kuraasta baarkinka, kuraasta jardiinada, kuraasta magaalada, kuraasta fadhiga - labadaba alwaax iyo bir bir ah.
Intaas waxaa sii dheer, kala-duwanaanshaha shirkaddan waxaa ka mid ah dambiilayaasha waddooyinka, boorarka, looxyada macluumaadka, daboolida geedka, dheriyada ubaxa, istaagista baaskiilka, cawska iyo noocyada kala duwan ee alaabada dariiqa: deckchairs, ku habboon dekedaha, boulevard, park ama jardiinada magaalada.
Bellitalia - walxaha shubka iyo dhagxaanta
Bellitalia waa mid ka mid ah shirkadaha wax soo saarka ugu horreeya ee Yurub isku darka magaalooyinka la taaban karo iyo dhagaxa dabiiciga ah, oo caan ku ah xallinta qaab dhismeedka yar iyo qaab dhismeedka muuqaalka dhulka.
Shirkadda waxay shaqeyneysay in ka badan 40 sano, iyada oo ku kala soocday alaab tayo sare leh, hal-abuurnimo iyo naqshadeyn casri ah.
Alaabada dariiqa ee gudaha mashaariicda Shirkadaha Bellitalia ayaa ugu horrayn la caddeeyey inay yihiin beero la taaban karo oo la taaban karo, jardiinooyin iyo saqafyada magaalada. Kuraasta jiifka badanaa waa hal waxtar wax ku ool ah, oo abuuraya naqshad gaar ah.
Intaa waxaa dheer, Bellitalia waxay bixisaa dheryo la taaban karo oo dhowr ah iyo dhagaxyo, ma ahan oo keliya ubaxyo keliya ama sariiro ubax, laakiin sidoo kale geedaha ornalka ah.
Intaa waxaa sii dheer, Bellitalia ayaa ku takhasustay Abuurista ilo biyoodyo, dhejisyo ama xaddidaya taraafikada meelaha waaweyn iyo meelaha lagu ciyaaro, iyo sidoo kale weelka qashinka adag ee laga sameeyay sibidhka, dhagaxa ama dhagaxa lagu dayaco.
Naqshadeynta Magaalada - naqshad casri ah
Dhismaha jardiinooyinka yar yar, looxyada joogsiga, looxyada macluumaadka ee midabada moodada leh
Barxadaha baarkinka ee indhaha soo jiita ee leh qaab casri ah. Waxyaabaha qurxinta, dheryaha ubaxa, qashin qubka, hoyga baska, ama fariimaha xakamaynta taraafikada waddooyinka ayaa ah qaar ka mid ah wax soo saarka naqshadaha muuqaalka magaalooyinka ee shirkadda Naqshadeynta Magaalada.
Heerka tayada sare leh ee alaabada Magaalada naqshadaha waxaa lagu hubiyaa kontaroolada joogtada ah ee agabka iyo farsamada.
In sidan Naqshadeynta Magaalada waxay awood u leedahay inay kuu dammaanad qaado adkaynta sare ee badeecadeeda, iyo sidoo kale u hoggaansanaanta heerarka, amniga, ecology, raaxeysiga iyo raaxada adeegsadaha.
caqabadaha cawskaqufulgeedo ubaxadambiiloyinka jidadkakuraasta saldhiggaFadhiyada MagaaladaKuraasta BeerahaKursiga Beerta NasashadaKuraasta bir ee birtaqaybiyaha yar ee dhismahanaqshadaha yaryar ee magaalooyinkanaqshadaha yar ee beertaSharciga dhismayaasha yar-yarsoo saare naqshadeeye yar yardhisme yar oo beerta ku yaalalaabta gurigawaardiyaha geedkagoobaha ciyaartadhajintabaaskiilladaguddiyada macluumaadka